ICasa Ferca kwindawo yokuhlala yabucala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCamila
Indawo yokuhlala yabucala, entsha, nekhuselekileyo kwindawo ekhethekileyo kude nengxolo yesixeko, ilungele ukuphumla.
Uxhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi, kunye ne-A/C kumagumbi, umatshini wokuhlamba, i-Smart TV enentambo, i-Wifi, kunye nendawo yokupaka eyaneleyo. Ipaki enebala lokudlala ilungele abantwana.
Imizuzu eyi-7 kuphela ukusuka kumbindi wesixeko. Imizuzu ye-15 ukusuka kwi-Mall Metrocentro kunye nomzuzu we-1 ukusuka kwi-Mall El Encuentro entsha - El Sitio. Imizuzu engama-45 kuphela ukusuka kwezona lwandle zibalaseleyo kule ndawo.
Indawo entsha yokuhlala yabucala kwindawo ekhethekileyo enokhuseleko lweeyure ezingama-24.
Indlu enefenitshala ngokupheleleyo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo (ifriji, isitovu, i-oveni, imicrowave, iblender, umenzi wekofu, izitya, kunye neepani) kunye nebar yesidlo sakusasa ukuya kuthi ga kubantu abathathu.
Igumbi lokutyela labantu abayi-6 kunye negumbi lokuhlala eline-Smart TV.
Igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eligcweleyo, i-Walk-in Closet, i-Smart TV, kunye ne-A/C. Igumbi lokulala eli-2 eline-A/C, igumbi lokuhlambela. (Zonke amagumbi okuhlambela anezixhobo ezibalulekileyo zococeko lomntu).
Igumbi lokuhlamba impahla linendawo apho unokuhlamba ngesandla, umatshini wokuhlamba impahla, iayini kunye nebhodi yokuayina.
I-Terrace enegumbi lokuhlala kunye nepatio ilungele i-barbecues.
Ukupaka ukuya kutsho kwiimoto ezi-3 kunye nepaki enendawo yabantwana.
Senza ntoni malunga nokucocwa kunye nokubulala iintsholongwane endlwini ukwenzela ukhuseleko lwakho?
Siphumeze amanyathelo amatsha okucoca kunye nokubulala iintsholongwane kulandela iingcebiso zamaZiko oLawulo lweSifo kunye noThintelo, ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho, olo lweendwendwe ezizayo, kunye nezethu.
Senza konke esinako ukukunika indawo ecocekileyo nekhuselekileyo apho unokuphumla lula. Ngenxa yesi sizathu, ngaphandle kokucoca okuqhelekileyo; ezona ndawo zinonxibelelwano olukhulu, ezinje ngootshitshi, iqhosha lengcango, izixhobo zasekhaya, njl.njl., zicocwa ngocoselelo kwaye zibulawe iintsholongwane phambi kokufika kwakho. Sikwashiya isithuba phakathi kogcino ngalunye lweeyure ezingama-48. ukuze ukhuseleke.
Indawo yokuhlala yabucala, entsha, kunye nekhuselekileyo kwindawo ekhethekileyo kude nengxolo yesixeko, ilungele ukuphumla kunye nokwazi iSan Miguel. Ipaki enebala lokudlala ilungele abantwana.
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno. Ungalibazisi ukundibhalela! :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Miguel